Fiorenan'ny fandefasana herinaratra miaraka amin'ny induction, indostrian'ny indostria KGPS
Home / KGPS Generators Series / Fiantohana elektrika miaraka amin'ny fampidirana
Sokajy: KGPS Generators Series Tags: Electric induction furnace, fandroana elektrika, fantsom-pamokarana herinaratra elektrika, induction furnace, induction fusion fio, lafaoro fandrefesana, fofona afon-tsilo
Electric Furnace Fusion with Induction
1. TSY misy indrafo
3. pofona elektrika avo be
4. melting metal isan-karazany
5. fanarenana angovo
Fotoana mangidy Min 20-60 20-60 30-70 30-70 30-70 30-70 40-80 50-90 50-90
1. Taranaka vaovao misy vokany fitsitsiana angovo avy amin'ny lafaoro fampidirana IF dia misy fiatraikany kely amin'ny herinaratra, mampihena fahombiazana avo lenta, fitoviana eo amin'ny maripana, fahaverezan'ny oksidasiana kely, mora fehezina, ny vokatra azo avy amin'ny insulation dia tsara sns. RAHA rafitra fanaraha-maso lafaoro fampidirana an-tsokosoko mampiasa teôria fanovana herinaratra AC-DC voafehy silikika, ny fanaraha-maso tsy famindrana nomerika, miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta sy ny faharetan'ny fahaiza-manao anti-jamming miaraka amin'ny fanaraha-maso mandeha ho azy, ny fizotran'ny asa tsy misy fidiran'ny olombelona, ​​dia mifanentana amin'ny enta-mavesatra sy fahefana. Miaraka amin'ny fandefasana amin'izao fotoana izao, ny fatran'ny herinaratra, ny tsy fahampian'ny dingana, ny tsy fahampian'ny fiarovana ny tsindry rano izay mamela ny fitaovana misy tsy fahombiazana mandritra ny fiasana dia tsy hanimba ireo singa, hampihena ny fampiasana fitaovana sy ny vidin'ny fikojakojana. Miaraka amin'ny hafanana tafavoaka, mitsonika, mamono, mitsabo hafanana, manadio, toy ny fanohanana ny fampiasana kristaly tokana voasintona Afaka mampitombo ny rafitra fanehoan-kevitra momba ny maripana, ny firafitry ny rafitra fanitsiana mandeha ho azy ny mari-pana mihombo: mampitombo ny mari-pana amin'ny fisarahana mifamatotra amin'ny masinina, mba hahatratrarana ny mari-pana forging mari-pana amin'ny gara. Ny fampidirana interface manokana, ekeo ny PLC na ny "interface milina-man", ny fibaikoana ny milina indostrialy ary ny rafitra fanafanana hahatratrarana ny fifehezana manan-tsaina, ampiarahana amin'ny fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana marindrano ho an'ny fifehezana ny mari-pana amin'ny fampiharana ny smelting.
2. Fofona entona famonoana dia ahitana:
3. fanohanana fitaovana ilaina:
Induction Melting Stainless Steel
Electric Ceiling Furnace